Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Baaritaannada mobilada ayaa ku soo laabanaya duulimaadyada Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Inta lagu jiro soo-gelitaanka mobilada, koodhadhka QR ee shahaadooyinka waraaqaha hadda waa la baari karaa oo sidaas si dhakhso leh oo habboon ayaa loo hubin karaa.
Lufthansa waxay ku soo celineysaa jeegaga mobilada duulimaadyada ka imanaya meelaha aan halista ahayn.
Socotada mar labaad waxay si toos ah ugu heli karaan kaadhadhkooda raacitaanka taleefankooda casriga ah.
Kaarka baasaboorka dhijitaalka ah, ma jiro dokumenti dheeraad ah oo lagama maarmaan u ah miiska soo-galidda.
Lufthansa waxay mar kale u soo bandhigaysaa rakaabkeeda hanaan is-gelitaan oo ku habboon. Dhammaan duulimaadyada toddobaadlaha ah ee 2000 oo ka imanaya aagagga aan halista ahayn ee aagga Schengen (hadda ka yimid Spain, Talyaaniga ama Iswiidhan, tusaale ahaan) ilaa Jarmalka, socdaalayaashu waxay mar kale si toos ah ugu siin karaan kaadhka raacitaanka taleefannadooda gacanta marka ay soo galayaan.
Tan waxaa suurtageliyay xaqiijinta otomaatiga ah iyo tan dhijitaalka ah ee shahaadooyinka tallaalka Midowga Yurub, oo caddeynaysa ilaalinta tallaalka oo buuxa, iyo natiijooyinka baaritaanka COVID-19 ee ka yimid shaybaarka Centogene.
Inta lagu jiro soo-gelitaanka mobilada, koodhadhka QR ee shahaadooyinka waraaqaha hadda waa la baari karaa oo sidaas si dhakhso leh oo habboon ayaa loo hubin karaa. Taas micnaheedu waa in kaarka dhijitaalka ah ee dhijitaalka ah la bixin karo oo hubinta dukumentiga dheeraadka ah ee miiska soo gelitaanka ee gegida dayuuradaha ayaan loo baahnayn.
Laakiin isla sidaas ayaa quseeya kuwo kale oo badan Lufthansa duulimaadyada: qof kasta oo ka welwelsan inaysan haysan shahaadooyinkii saxda ahaa ee safarka wuxuu ku hubin karaa a Xarunta Adeegga Lufthansa ilaa 72 saacadood ka hor bixitaanka. Kuwani waxay caddayn u noqon karaan baaritaanno, cudur ka badbaaday COVID-19 iyo tallaallo. Xaqiijinta codsiyada gelitaanka dhijitaalka ah ayaa sidoo kale lagu hubin karaa sidan. Waad ku mahadsan tahay xalalka dhijitaalka ah ee cusub, jeeggu hadda qayb ahaan waa otomatik sidaa darteedna aad buu u dhakhso badan yahay, sidoo kale Xarunta Adeegga.
Duulimaadku wuxuu kula taliyaa martidiisa in caddaynta dhijitaalka ah ka sokow, shahaadooyinka asalka ah ee la daabacay ay tahay in weli lagu sii wado safarka illaa ogeysiis dambe.